I Malakia na Malaky dia mpaminany israelita tamin’ny taonjato faha-5 izay heverina, araka ny lovantsofina, fa nanoratra ny boky ao amin’ny Baiboly izay mitondra ny anarany, dia ny Bokin’i Malakia.
I Malakia sy ny Bokin'i Malakia
Ny mpanoratra ny Bokin'i Malakia
Manao ny mpanoratra ny Bokin’i Malakia ho i Ezra (Esdrasa) na i Zorobabela na i Nehemia ny lovantsofina sasany. Ny hafa indray mitazona an’i Malakia, izay Levita sady isan’ireo tao amin’ny “Sinagoga Lehibe”. Ny mpikaroka amin’izao andro izao, na dia izany aza, noho ny fitovitovizan’ny lohateny (ampitahao Mal. 1.1 sy Zak. 9.1 ary Zak. 12.1), dia milaza fa tsy fantatra ny anaran’ny olona nanorara ny boky.
Ny anarana hoe Malakia
Araka ny Easton’Bible Diktionary dia mety tsy anaran-tsamirery ny hoe Malakia fa midika fotsiny hoe “mpitondra hafatr’i YHWH” (anglisy: “messenger of YHWH”). Ny Septoaginta (na Septanta, izay dikan-tenin’ny Testamenta Taloha amin’ny teny grika, dia manoratra azy hoe ἐν χειρὶ ἀγγέλου αὐτοῦ / en kheiri angélou autou, izay midika ho “amin’ny alalan’ny tanan’ny irany”.
Tsy miseho amin’ny toeran-kafa ao amin’ny Baiboly ny anaran’i Malakia, tsy misy firesahana momba azy nataon’i Ezra (na Esdrasa) ary tsy miresaka mivantana ny amin’ny nanaganana indray ny Tempoly izy. Noho izany dia misalasala ny mpikaroka sasany raha nosoratana tokoa ho anaran-tsamirerin’ilay mpaminany ny hoe mal'akhi. Marihina fa tsy manavaka ny sora-baventy (Mal'akhi) sy ny sora-madinika (mal'akhi) ny abidia hebreo. Nefa tsy misy amin’ireo lohatenim-bokim-paminaniana ao amin’ny Tanakh ny tsy mitondra anaran’olona. Ny hoe mal'akhi dia midika hoe “irako” na “mpitondra hafatro”, miseho ao amin’ny Mal. 3.1 io teny io (ampitahao amin’ny Mal. 2.7). Io teny io anefa dia tokony ho sarotra atao anaran-tsamirery raha tsy miaraka amin’ny tapak’anaran’Andriamanitra hoe Yah, izany hoe tokony ho mal’akhyah, “irak’Andriamanitra”. Izay ataon’ny Septoaginta hoe “amin’ny alalan’ny tanan’ny irany” dia ataon’ny Targoma (Targum) hoe “amin’ny alalan’ny tanan’ny anjeliko, izay atao hoe Ezra mpanoradalàna”.
Ny fotoana niainana sy niasan'i Malakia
Ny fotoana niainany
Tsy mitovy ny hevitry ny tsirairay raha ny amin’ny fotoana niainan’ny mpaminany, nefa saika ny mpikaroka rehetra no manaiky fa naminany mandritra ny vanim-potoana persiana i Malakia, sady taorian’ny fananganana sy ny fanokanana ny Tempoly faharoa tamin’ny 516 tal. J.K. (ampitahao Mal. 1.10 ; Mal. 3.1; Mal. 3.10). Niteny ny amin’ny “governora” ny mpaminany (hebreo: pekhah, jereo: Mal. 1.8), izay mitovy amin’ny fitenin’i Hagay sy i Nehemia (Hag. 1.1; Neh. 5.14; Neh. 12.26). Ny endriky ny fiarahamonina resahina ao amin'ny boky dia ny an’ilay fotoan’ny Fanavaozam-pivavahana. Tokony ho niaina sy niasa tamin’ny fotoan-dry Ezra (Esdrasa) sy i Nehemia i Malakia. Ireo fanararaotana ratsy izay voalaza ao amin’ny Bokin’i Malakia dia mitovy amin’izay hitan’i Nehemia tamin’ny fitsidihan’i Nehemia fanindroany an’i Jerosalema tamin’ny 432 tal. J.K. (Neh. 13.7), ka tokony hitombina ny filazana fa naminany tamin’ny fotoan’i Nehemia i Malakia na toriana kelin’izay.
Ny fotoana niasany
Ny mpanonta ny Jewish Encyclopedia tamin’ny 1906 dia manatsoa-kevitra fa naminany taorian’i Zakaria sy i Hagay i Malakia (Mal. 1.10; 3.1; 3.10) sady mandroso hevitra fa nanambara izany faminaniany izany izy tokony ho tamin’ny taona 420 tal. J.K., izany hoe taorian’ny fiverenan’i Nehemia fanindroany avy any Persia ho any Jerosalema (Neh. 13.6) na talohan’izany, raha ampitahaina amin’ny voalaza ao amin’ny Bokin’i Malakia sy amin’ny Bokin’i Nehemia (Mal. 2.8 amin’ny Neh. 13.15 na Mal. 2.10-16 amin’ny Neh. 13.23).
Atao hoe Apokrifan'ny Baiboly na Boky apokrifa na Soratra apokrifa na Apokrifa fotsiny ireo boky nosoratana ho boky masina nefa tsy voaray ho ao amin'ny lisitry ny boky ekena ho filamatry ny finoana ao amin'ny Baiboly kristiana na amin'ny Baiboly jiosy. Izany lisitra izany no atao hoe kanona. Tsy mitovy ny fampiasan'ny Katolika sy ny Protestanta ny teny hoe apokrifa. Samy manana ny lisitry ny boky ataony hoe apokrifa ny fanontana Baiboly tsirairay.
Ny Bokin’i Jeremia dia boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana izay mitantara ny fotoana mahatsiravina taloha kelin'ny hadravan'ny Babiloniana ny Fanjakan'i Jodà sy ny nahatanterahan'izany noho ny tsy fanajan'ireo mpanjakan'i Jodà an'Andriamanitra. Betsaka ny Jiosy natao sesitany nefa nisy ihany koa ireo nijanona tao Palestina teo ambany fanaraha-mason'ny solonten'i Babilona.
Ny bokin'ny mpaminany na bokim-paminaniana dia fitambarana boky ao amin'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly izay inoan'ny Kristiana fa nosoratan'ny mpaminany nahazo tsindrimandry avy amin'Andriamanitra. Fanasokajiana ao amin'ny Baiboly kristiana io ka tsy tokony hafangaro amin'ny hoe Mpaminany (na Nevi'im) ao amin'ny Baiboly hebreo. Misy sokajy roa ny bokin'ny mpaminany, dia ny atao hoe mpaminany lehibe sy mpaminany madinika.
Ny fokon'i Levy dia iray amin'ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely. Tsy nahazo anjara tany azy manokana ny fokon'i Levy fa niparitaka tamin’ny tanana miisa 48 miaraka amin’ireo foko sisa ao amin’ny Zanak’i Israely.
I Hagay na Akjea dia mpaminany resahina ao amin’ny Baiboly izay isan’ireo nanetsiketsika ny fahatongavan-tsain’ny Jiosy taorian’ny Fahababoana mba hanamboatra indray ny Tempoly ao Jerosalema tamin’ny taona 516 tal. J.K. Tsy dia misy zavatra firy fantatra ny amin’ny tantaran’i Hagay manokana. Tokony ho iray amin’ireo nentin’i Nebokadnetsara babo tany Babilona izy.
Nonomboka ny asany tokony ho enina taona taorian’ny fiverenan’ny Jiosy tao Joda izy (520 tal. J.K.). Niverina avy tany Babilona niaraka tamin’i Zerobabela sy naminany tao Jerosalema tokony ho tamin’ny taona 521-520 tal. J.K. tamin’ny nanjakan’i Dariosa I i Hagay. Nitovitovy fotoana nahavelomana tamin’i Zakaria sy i Malakia. Satria ny fanamboarana indray ny Tempoly dia nijanona tanatin’ny valo taona vokatry ny zavatra nataon’ireo Samaritana. Niezaka izy sy i Zakaria namporisika ny vahoaka ka nanaitra azy ireo hifoha amin’ny torimasony, sady nitarika azy ireo mba hanararaotra ny fiovan’ny fitantanan’ny Persiana tamin’ny andron’i Dariosa I.
Nampahatsiahiviny fa ny Tempoly dia tsy hahamasina vahoaka manao asa tsy madio. Naminany izy fa ho faharava ny fanjakana persiana aorian’ny ady an-trano. I Hagay dia heverin’ny maro fa nanoratra ny boky mitondra ny anarany, dia ny Bokin’i Hagay.